Ekwesịrị itinye njem nlegharị anya na mkparịta ụka inweta ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ekwesịrị itinye njem nlegharị anya na mkparịta ụka inweta ọgwụ mgbochi
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Onye isi oche ATB Maazị Cuthbert Ncube na Africa Tourism Board Project Hope
Ọ bụ ezie na ụmụ amaala nọ na Europe na North America nwere oke ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke, Africa, Caribbean na ebe ndị njem nlegharị anya ndị ọzọ nọ n'azụ ụwa. Nke a na -akwụsị akụ na ụba ka ọ rụọ ọrụ, ọkachasị njem njem na njem.
Cuthbert Ncube, onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa gbalịsiri ike ịbawanye ọgwụ mgbochi COVID-19 na Africa. Ọ na -ekwu na njem ezumike adịghị na mkparịta ụka dị otu a.
Netwọk Njem Nleta Ụwak Onye isi oche Juergen Steinmetz na -agba ume ka njem bụrụ akụkụ nke mkparịta ụka a. Njem nleta bụ mpaghara akụ na ụba dị mkpa maka ọtụtụ mba ma ọ nweghị ike ịrụ ọrụ na -enweghị ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na ndị ọbịa ka a gbaa ọgwụ mgbochi.
Ndị isi nke International Monetary Fund (IMF), World Bank, World Health Organisation (WHO), na World Trade Organisation (WTO) zutere ndị isi nke African Vaccine Acquisition Trust (AVAT), Africa CDC, Gavi, na UNICEF na-agbasa ọgwụ mgbochi ngwa ngwa na mba ndị nwere obere ego na obere ego, ọkachasị na Afrịka.
“Mba ndị a, nke ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha nọ n'Africa, enweghị ike ịnweta ọgwụ mgbochi zuru oke iji mezuo ebumnuche ụwa niile nke mkpuchi pasent 10 na mba niile site na Septemba na pasent 40 ka ọ na -erule 2021, hapụ naanị ebumnuche nke African Union nke pasent 70 na 2022. ", Ndị ọrụ UN kwuru.
Enweghi ike ịgba ọgwụ mgbochi
Ọgba aghara nke enweghị ọgwụ mgbochi ọrịa na-ebute “ọdịiche dị ize ndụ” na ọnụego lanarị COVID-19 yana na akụ na ụba ụwa, ndị isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru, na-egosipụta ekele maka "ọrụ dị mkpa" nke AVAT na COVAX n'ịgbalị idozi "ọnọdụ a na-adịghị anabata". .
Agbanyeghị, ha dọrọ aka na ntị, “ịlụ ọgụ nke ọma na ụkọ ụkọ ọgwụ mgbochi ọrịa a na mba ndị nwere obere ego na obere ego, yana na-enyere AVAT na COVAX aka, chọrọ nkwado ngwa ngwa nke ndị na-emepụta ọgwụ mgbochi ọrịa, mba ndị na-emepụta ọgwụ mgbochi, na mba ndị mezurula. ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị elu ”.
Na -erute ebumnuche
Iji hụ na mba niile na-emezu ebumnuche ụwa nke opekata mpe pasent iri ka ọ na-erule Septemba, yana pasent 10 ka ọ na-erule ngwụcha afọ, ndị isi UN kpọrọ oku ka mba ndị butere nnukwu ọgwụ mgbochi ka ha “gbanwee usoro nnyefe dị nso. ya na COVAX na AVAT ”.
Ha dụkwara ndị na -emepụta ọgwụ mgbochi ka ha 'bute ụzọ ozugbo ma mezuo' nkwekọrịta ha na COVAX na AVAT, yana ịnye amụma amụma doro anya mgbe niile.
Ọzọkwa, ndị isi ụlọ ọrụ UN gbara ndị mba G7 mepere emepe na mba niile na-ekerịta ọgwụ ume ka ha “mezuo nkwa ha ngwa ngwa” site na ịhụ ụzọ pipeline ka mma, ndụ ngwaahịa, yana nkwado maka ihe enyemaka-dị ka naanị pasent 10 nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 900 emebere ọgwụ nwere. ka a ga -ebupụ.
Nkwupụta ahụ gara n'ihu, "Anyị na-akpọku mba niile ka ha wepu mmachi mbupụ na ihe mgbochi azụmahịa ọ bụla na ọgwụ mgbochi COVID-19 yana ntinye aka na mmepụta ha".
Ahụike ụwa 'nọ n'ihe ize ndụ'
N’otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ndị UN na -arụsi ọrụ ike na COVAX na AVAT iji dozie nnyefe ọgwụ mgbochi, imepụta ya na azụmahịa ya, ọkachasị na Africa.
Ha na -achịkọta ego na ego mgbazinye ego iji kwado ọrụ a.
"Anyị ga -enyochakwa usoro ego iji kpuchie mkpa ọgwụ mgbochi n'ọdịnihu dị ka AVAT rịọrọ… [na] na -akwado maka amụma na ntinye ego ka mma iji kwalite nkwadebe obodo na ikike ịmịkọrọ ihe", ha mesiri obi ike.
Ndị isi ụlọ ọrụ UN kwadoro na ha ga-aga n'ihu ịkwalite data, chọpụta oghere na melite nghọta na ntinye na ojiji nke ngwa COVID-19 niile.
“Oge ime ihe bụ ugbu a. Usoro ọrịa a - yana ahụike nke ụwa - nọ n'ihe ize ndụ ”, nkwupụta ahụ kwubiri.
Onye isi oche njem nlegharị anya nke Africa Cuthbert Ncube kwuru:
“Njem nlegharị anya nke Afrịka agaghị arụ ọrụ na onye ọ bụla nọ n'ahịa anyị na ndị nnata nwere ohere ịgba ọgwụ mgbochi. Afrịka nọ n'ihe egwu dị egwu. Akụkụ niile metụtara, ọkachasị njem ga -anọrịrị n'otu tebụl mgbe a na -atụle atụmatụ nkesa ọgwụ mgbochi dị otú ahụ. ”
Juergen Steinmetz, onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa gbakwunyere:
Ọ na -ewute ịhụ na UNWTO agaghị abụ akụkụ nke mkparịta ụka a. Ngalaba anyị chọrọ nnọchite anya ngwa ngwa na ọkwa niile. Ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ntọala ọhụrụ nke njem ọ bụla ga -arụ ọrụ. WTN dị njikere imeju oghere a na ikwu okwu maka ndị na -enweghị ike ma ọ bụ na -enweghị ike. ”